फनपार्कलाई भृकुटीमण्डप छोड्नुपर्ने – MEDIA DARPAN
फनपार्कलाई भृकुटीमण्डप छोड्नुपर्ने
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Apr 29, 2019
समाज कल्याण परिषदले काठमाडौं फनपार्क र टुकुचा तरकारी बजारसँगको जग्गा भाडा सम्झौता एकतर्फी रुपमा खारेज गरेको छ । प्रदर्शनीमार्गमा रहेको आफ्नो साढे ८३ रोपनी जग्गाको भाडा करार सम्झौता खारेज गरिएको परिषदका प्रवक्ता शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा काठमाडौं फनपार्क प्रा.लि. ल्यामपुचः र हरितकृषि सहकारीले सम्झौता गरेर भाडामा लिएका थिए । फनपार्कले ६० रोपनी, ल्यामापुचःले २५ रोपनी र हरितकृषि सहकारीले ८.५ रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
उक्त जमीनमा काठमाडौं फनपार्क र ल्यामपुचःले बालबालिका लक्ष्यित खेल सामग्री तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर बालबालिकाहरुसँग महंगो शुल्क असुल्दै आएका छन् । हरित कृषि सहकारीले टुकुचा तरकारी बजार सञ्चालन गरेको छ ।
समाज कल्याण परिषदमा अनियमितता भएको विषयमा छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले जग्गा भाडा सम्झौतामा अनियमितता भेटिएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अत्यन्त न्यून मूल्यमा जग्गा भाडामा दिइएको प्रतिवेदनको ठहर थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता रद्दको एकतर्फी निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
‘काठमाडौं फनपार्क र ल्यामपुचःलाई १५ दिनअगाडि नै पत्र काटेर सम्झौता भंगको जनाकारी गराइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हरितकृषि सहकारीलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’
सम्झौता भंग गरिएका तीनै पक्षलाई पत्र प्राप्त मितिले ६० दिनभित्र उक्त जमिन खाली गर्न परिषदले सूचित गरेको छ ।
तर, फनपार्कको २५ रोपनी जमिन ०५३ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको ल्यामपुचःले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको परिषदले जनाएको छ । ०५३ सालमा ल्यामपुचःसंग २५ वर्षका लागि, ०६९ सालमा काठमाडौं फनपार्कसँग १५ वर्षका लागि र ०७४ असोज ३० मा हरितकृषि सहकारीसँग २५ वर्षका लागि करार गरिएको थियो ।
विभिन्न समयमा भएका फरक-फरक सम्झौताअनुसार यी तीनवटै पक्षलाई तोकिएको भाडादर अस्वभाविकारुपमा सस्तो थियो । सम्झौताअनुसार फनपार्कले परिषदलाई मासिक ६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्छ । यस्तै ल्यामपुचःले परिषदलाई मासिक १३ हजार २६७ रुपैयाँ र त्यहाँ सञ्चालित रेल टिकटको ५ प्रतिशत रकम बुझाउने सर्तमा २५ वर्षका लागि भाडामा पाएको थियो ।
ल्यामपुचःसँगको परिषदको सम्झौता सकिन २ वर्ष मात्रै बाँकी छ । हरित कृषि सहकारीले मासिक ११ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
ठेक्का लिने व्यवसायी भन्छन्- अदालत जान्छौं
ल्यामपुचःकी अध्यक्ष सहशीला श्रेष्ठले समाज कल्याणसँग आफ्नो कम्पनीले गरेको सम्झौता भंगबारे कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको दावी गरिन् । सम्झौता अनुसार अझै तीन बर्ष आफूहरुले यस ठाउँमा ब्यापार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले अन्यथा गरिए अदालत गएर कानुनी उपचार खोजिने बताइन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका बालबालिकालाई मनोरञ्जन दिँदै आएको कम्पनीलाई हठात रुपमा हटाइनु नहुने उनको तर्क छ ।
करार भंगबारे काठमाडौं फनपार्कका सञ्चालक रबिन्द्र गुरुङसँग सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा उनी देश बाहिर भएको फनपार्कका म्यानेजर बोधराज कट्टेलले जानकारी दिए ।
आफूहरुले नियमसंगत ढंगबाटै काठमाडौं फनपार्क सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले करार सम्झौता खारेजबारे कुनै औपचारिक जानकारी आफूले नपाएको बताए ।
त्यस्तै, हरित कृषि सहकारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन गरिएको प्रयास नबिथोल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सहकारीका कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख कोमलचन्द्र बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा किसानको रोजीरोटी नखोस्न आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन !
पाल्नुहोस आलु होटेलमा: यस्ता छन् बिशेषता